Doodda Shirkada Dhaweeye dagaalka Tukhaanleyaasha (WQ: Cali Cabdi Coomay) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Doodda Shirkada Dhaweeye dagaalka Tukhaanleyaasha (WQ: Cali Cabdi Coomay)
April 5, 2021 | Filed under: ARRIMAHA BULSHADA,MAQAALLADA | Posted by: Aadan Fowsi
Toddobaadadii ugu dambeeyey wuxuu khilaaf xoogani ka dhextaagnaa shirkada Dhaweeye ee gacanta ku haysa nidaamka (App) ay ku shaqeeyaan tagaasida casrigan ee loogu wanqalay (Tukhaan ama Vitz).
Dirawaliinta Tukhaanleyaashu waxa ay ku doodayaan xisaab cad oo miiska u saaran iyo siday shirkada Dhaweeye oo hoos tagta Telesom ay uga faa’iido waxa ay soo saaraan. Qiyaas ahaan waxa ay sheegeen inay gaadhayaan 2,500 oo tagsi tukhaan ahi inay ka shaqeeyaan Hargaysa. Xisaabtooda oo miiska saarani waa tan:
= Waxaanu maalin kasta ku shubanaa Internet-ka Telesom $0.5 marka lagu dhufto 30 cisho oo bishii ah waxa soo baxaya 0.5×30= $15. Haddii intaasi lagu dhufto 2,500 oo tagsi waxa ay noqonaysaa 2,500x$15= $37,000 bishii.
= Waxaanu ku shubanaa lacagta ku hadalka Tilifoonka ee bishii ee ah $7. Markaa haddii bishii la xisaabiyo waxa ay noqonaysaa 2,500x$7= $17,500. Isku geyntaa lacagta ay bishii naga macaashto shirkada Dhaweeye ama Telesom waa $55,000. Markaa macaashkii ay na saari lahayd way naga haysaa. Waxa se naga doonaysaa macaash aanaan awooddi karayn oo ah qaab dhiig-miirato ah.
Maxaa Keenay khilaafka taagan?
Shirkada Dhaweeye ayaa soo rogtay in tobankii kun ee ah dhakhli kasta oo soo gala tagsiga Tukhaanka ah ay ku leeyihiin kun shilin. Taasina waxa gaashaanka ku dhuftay tukhaanleyaasha oo yidhi ma qaadi karno. Dhawr mudahaarad oo ay arrintan kaga cabbanayaan ayaa ka dhacay Hargaysa maalimihii la soo dhaafay. Dawladda ayaa soo kala dhexgashay oo labada dhinac isku soo jiidaysa haatan. Tukhaanleyaasha ayaa ku kala qaybsan xalka arrintan laga gaadhayo. Qaar waxa ay qabaan in safar kasta oo ay qof ku qaadaan laga qaado lacag cayiman. Halka kuwa kale ay qabaan in maalintii oo dhan laga qaado hal doolar oo keliya. Labada dhinac ayaa saaray guddiyo iyo dawladda oo xalka arrintan ku jira.
Markaad u kuurgasho cabashada ka timaada dadka ay qaadaan tukhaanleyaashu, haddiiba uu qof ka soo cawdo tagsi qaaday, markiiba cabashadii waxa la gaadhsiinayaa dirawalkii. Dhinaca cabashada dirawalladiinta ee uu qof macmiil ahi kula kaco, wax ku filan laga qabto.